Tafaporitsaka ny Honor Play 5X | Androidsis
Huawei dia iray amin'ireo mpanamboatra izay hahatadidy ity 2015 ity ho iray amin'ireo taona nanitarana ny orinasa, na amin'ny varotra na amin'ny isan'ny finday avo lenta novokarina. Ny tatitra dia manondro fa ity orinasa ity dia mpanamboatra finday izay nitombo indrindra nandritra ny telovolana farany tamin'ny 2015.
Any Chine ohatra, dia nahavita namoaka an'i Xiaomi tamin'ny laharana 1 an'ny mpamokatra finday avo lenta ity mpanamboatra ity. Ary raha miteny manerantany, ny varotra fitaovana avy amin'ity mpanamboatra ity nitombo 71%Ny anton'ity fiakarana ity dia ny fitomboan'ny firenena Aziatika, ary koa ny fahafahany manangana Nexus avo lenta, toy ny Nexus 6p. Ho fanampin'izany, ny mpamokatra sinoa dia nandefa marika kely antsoina hoe, Honor, izay ahitanay finday avo lenta mahaliana toy ny Hajao 7.
Fantatsika izao fa eo am-pelatanany orinasa iray hafa ny orinasa izay fantatsika ny fisiany noho ny fivoahan'ny tsiranoka vao haingana, io no Lalao Honor 5X.
Lalao Honor 5X
Raha ny filazan'ireo tafaporitsaka dia hampiditra a ny fitaovana vaovao an'ny marika kely Huawei Efijery 5 santimetatra miaraka amin'ny famaritana avo lenta (1920 x 1080p). Ao anatiny no ahitantsika processeur valo-fototra novokarin'i Qualcomm, ny Snapdragon 615, afaka mahatratra ny hafainganan'ny famantaranandro 1.50 GHz, ary koa ny Adreno 405 GPU ho an'ny sary. Miaraka amin'ity SoC ity izy ireo dia hiaraka aminao Fahatsiarovana RAM 2 na 3 GB miaraka amin'ny Fitaovana anatiny 16 GB miaraka amin'ny fahafaha-manitatra ny fahafaha-manao hatramin'ny 128 GB amin'ny alàlan'ny slot microSD.
Anisan'ireo fiasa manandanja hafa, hitantsika ny fomba hametrahan'ny fitaovana bateria 3.000 Mah, ho fakan-tsary ireo 13 Megapixels misy aperture f 2.0 sy 5 Megapixels ho an'ny fakantsary eo aloha. Hitanay koa ny mpamaky rantsan-tanana, ny fifandraisana 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1 LE ary GPS amin'ireo sensor hafa. Ny Honor Play 5X dia hihazakazaka eo ambanin'ny kinova Android 5.1 Lollipop eo ambanin'ny sehatr'ilay orinasa EMUI 3.1
Raha ny tsiliantsofina momba ny terminal dia hanana vidiny eo ho eo ny fitaovana Huawei sy Honor vaovao 150 € miova ho azy Modely 16GB y 2GB an'ny RAM, vidin'ny 207 € ho an'ny maodely Fahatsiarovana RAM 3 GB y 16 GB fahatsiarovana. Ny fitaovana dia ho hita amin'ny volafotsy sy volamena. Ireo antsipiriany ireo dia tsy maintsy alaina miaraka amin'ny tweezers foana, satria tsaho, mety miovaova izy ireo raha ny amin'ny famaritana ofisialy. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy ny fanambarana ofisialy, noho izany dia hiandry isika hahalala izay azo antoka momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Tafaporitsaka ny Honor Play 5X
Ny vaovao momba ny Telegram dia vondron'olona mihoatra ny 1000